Ohatra: Martin Vrijland
Tadiavin'ny Trump ny aterineto "nesorina" taorian'ny fanafihana mpampihorohoro Londres metro miaraka amin'ny siny amin'ny kitapo
Filed in NEWS ANALYZES, OHATRA	by Martin Vrijland	amin'ny 15 September 2017	• 12 Comments
Ny fanafihan'ny mpampihorohoro tany ambanin'ny tany tao Londres niaraka tamin'ny siny fotsy tao amin'ny kitapo Lidl, dia nametraka hery goavana teo amin'ny tongony. Ny vehivavy eo amin'ny sary dia naratra mafy ary ny 18 naratra dia nafindra tany amin'ny hopitaly. Tsy maintsy nisy fipoahana goavana ary sambatra ny tambajotra misahana ny fiara mpamonjy voina [...]
Barcelona Ramblas ny fomba hamerenana feom-basy: Julian Cadman, ilay mahery fo, ny imam fo ary ny mpampihorohoro
Filed in NEWS ANALYZES, OHATRA	by Martin Vrijland	amin'ny 21 August 2017	• 25 Comments
Araka ny lahatsoratra teo aloha momba ny Barcelona Ramblas fanafihana sy ny fanafihana tsy mifandray ao Cambrils sy ny entona fipoahana tao Alcanar ny alina aloha, dia namaritra ny andalana malalaka ny soratra izay fantatra amin'ny fanafihana ankapobeny. Ao anatin'izany dia tsy nilaza afa-tsy ny fisian'ireo olona izay tafavoaka velona tamin'ny fanafihana teo aloha, [...]
Ronald Bernard dia nandray mpilalao sarimihetsika tsara tamin'ny alalan'ny fampahalalam-baovao hafa
Filed in [AIVD ALARM], NEWS ANALYZES, OHATRA	by Martin Vrijland	amin'ny 14 August 2017	• 74 Comments
Ananako ao amin'i anatin'ny volana vitsivitsy izay no tsy tapaka nanontany hoe: "Ahoana no hevitrareo ny Ronald Bernard?" Efa foana nisoroka ny fanontaniana na namaly nandritra ny fotoana fohy, ary ny ankamaroany nijery fotsiny ny fomba tsara ny olona handeha ho toy izany fandrika. Satria mpilalao horonantsary i Ronald Bernard, dia mijoro ho toy ny lavaka eo ambonin'ny rano aho. Tsy hoe izaho [...]
Ny fanafihan'ny mpampihorohoro mpampihorohoro tao London tamin'ny 3 June mbola misy fanesoana hafa?
Filed in NEWS ANALYZES, OHATRA	by Martin Vrijland	amin'ny 5 June 2017	• 81 Comments
Ny fanafihan'ny mpampihorohoro tamin'ny Asabotsy hariva 3 June dia tena mahavariana ary mampiseho ny fifandirana rehetra. Tsy voalaza ny isa 3 June; Izany no tena fisainan'ny fikomiana, ka 3 x 6 dia 666. Tsia, andeha hojerentsika ireo zava-mahagaga tsy hitanao fa tsy hahita valiny. Mazava ho azy [...]
Aart Zeeman, Jinek, Brandpunt ary ny orinasa vaovao hosoka Rosiana
Filed in NEWS ANALYZES, OHATRA	by Martin Vrijland	amin'ny 8 Febroary 2017	• 60 Comments
Ny andro talohan'io omaly Aart Zeeman dia vahiny tao Jinek mba hanazava ny fikarohana nataony manintona sy ny nahitana ny orinasa vaovao sandoka Rosiana ao Saint Petersburg. Omaly dia navoaka tamin'ny NPO2 ny fampielezana ny Brandpunt. Ny vokatry ny fikarohana nataon'i Aart Zeeman dia ny fahitana ireo vavolombelona lazaina fa feno [...]
Total visits: 14.675.682